တရုတ်နိုင်ငံထုတ် AC313A ခရီးသည်တင်ရဟတ်ယာဉ်ကြီးကိုစမ်းသပ်ပျံသန်း - Xinhua News Agency
နန်ချန်း၊ မေ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံက ပြည်တွင်း၌ အမှီအခိုကင်းစွာထုတ်လုပ်ထားသည့် AC313A ခရီးသည်တင် ရဟတ်ယာဉ်ကြီးကို မေလ ၁၇ ရက်တွင် အောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ပျံသန်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်း လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း Aviation Industry Corporation of China (AVIC) က ကြေညာခဲ့သည်။
အလေးချိန် ၁၃ တန်ရှိသော ဝန်အားမြင့် ရဟတ်ယာဉ်ကြီးသည် တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ကျန်းရှီးပြည်နယ် Jingdezhen ရှိလေဆိပ်မှ စမ်းသပ်ပျံသန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံ လေကြောင်းအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးစနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အရေးပါသည့်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
စမ်းသပ်ပျံသန်းမှုပြီးစီးသောကြောင့် AC313A ရဟတ်ယာဉ် သည် လက်ရှိ တွင် ပြေးဆွဲမှုအတွက်စမ်းသပ်သည့်အဆင့်သို့ရောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း တီထွင်သူကဆိုသည်။
ထို ရဟတ်ယာဉ်ကြီး ကို တရုတ်နိုင်ငံ၏ ၁၄ကြိမ်မြောက် ၅ နှစ်တာစီမံကိန်းကာလ ဖြစ်သည့် (၂၀၂၁-၂၀၂၅) အတွင်း လေကြောင်းပျံသန်းသွားလာမှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိရန်ရည်မှန်းထားပြီး ထိုအဆင့်ပြီးပါက ခရီးသည်များကိုသယ်ယူပို့ဆောင်မည့်ဈေးကွက်သို့ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
AC313A သည် အကြီးဆုံး ရဟတ်ယာဉ်ကြီးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ၏ လိုအပ်နေသည့် လေကြောင်းကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အထူးစီမံထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို ရဟတ်ယာဉ်ကြီးကို နိုင်ငံ၏ အရေးပေါ်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ် ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းစေရန်အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း AVIC က ဆိုသည်။
AC313 ရဟတ်ယာဉ်အမျိုးအစားကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည့် AC313A သည် အင်ဂျင်သစ်များ ထည့်သွင်းထားသော အကြီးဆုံး ခရီးသည်တင်ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းဖြစ်ပြီး ဂီယာစနစ်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားကာ လေကြောင်းပျံသန်းမှုများနှင့်လေယာဉ်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များကဲ့သို့ များပြားလှစွာသောနည်းပညာများကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း AVIC က ဆိုသည်။
ရဟတ်ယာဉ်မော်ဒယ်အသစ်တွင် ဒေတာစုဆောင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ နိုင်သည့် နည်းလမ်းပါဝင်သည့် health and usage monitoring system (HUMS) ကို တပ်ဆင်ထားသကဲ့သို့ ရဟတ်ယာဉ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လုံခြုံရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည့် ဒလက်များ၌ ရေခဲကာကွယ်ရေးနှင့် အအေးဒဏ်ခံ ပစ္စည်းများကို တပ်ဆင်ထားသည်။
AC313A ၌ ခရီးသည် ပေါင်း ၂၈ ဦးကိုသယ်ဆောင်နိုင်ပြီး အများဆုံး အလေးချိန် ၁၃.၈ တန် ကိုသယ်ဆောင်ကာပျံတက်ထွက်ခွါနိုင်သည်။ ယင်းသည် မီးငြှိမ်းသတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ၌ ရေတန်ချိန် ၅ တန်အထိ သယ်ဆောင် ပျံသန်းနိုင်သည်။
ပျံသန်းမောင်းနှင်ရေး ပုံစံ နှစ်မျိုးဖြစ်သည့် VFR နှင့် IFR နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့်မောင်းနှင် နိုင်သည့် AC313A ရဟတ်ယာဉ်သည် ကုန်းမြင့်ဒေသများနှင့် အပူချိန်အတက်အကျ ရှိသည့် နေရာများကဲ့သို့ မည်သည့် ရာသီဥတုအခြေအနေ နှင့် မြေအနေအထားရှုပ်ထွေးသည့် ဒေသမျိုးတွင်မဆို မောင်းနှင်နိုင်သည်။
AC313A ရဟတ်ယာဉ်ကို အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အမျိုးမျိုးသော ပစ္စည်းကိရိယာများကို တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းက နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ ထောက်ပို့ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တောအုပ်နှင့်ကျေးလက် မီးငြှိမ်းသတ်ရေး၊ ကြီးမားသည့် ယန္တရားများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ကပ်ရောဂါ တားဆီးနှိမ်နင်းရေး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေး၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရေကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ရှာဖွေရေး ၊ ကမ်းလွန်ရေနံလုပ်ငန်းများတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပါအဝင် အခြားကဏ္ဍများတွင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဟု ထုတ်လုပ်သူကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | China’s AC313A large civil helicopter makes maiden flight
NANCHANG, May 17 (Xinhua) — China’s independently-developed AC313A large utility civil helicopter successfully conducted its maiden flight on Tuesday, announced the Aviation Industry Corporation of China (AVIC), the country’s leading aircraft maker.
The 13-tonne-class large helicopter conducted the flight at an airport in Jingdezhen, east China’s Jiangxi Province, markingamajor step forward in the development of China’s air emergency rescue system, the AVIC said.
AC313A isamajor aerial vehicle specially developed to meet the country’s needs for air rescue missions. It is expected to assist the country in strengthening the national air emergency rescue system, according to the AVIC.
AC313A can carry up to 28 people onboard, withamaximum take-off weight of 13.8 tonnes with external sling loads. It can also load up to five tonnes of water for firefighting missions.
AC313A can be installed with various facilities for emergency rescue missions. This allows it to carry out various missions across the country such as supply delivery, forest and urban fire fighting, lifting large equipment, disaster prevention and relief, medical rescue, law enforcement, maritime rescue and search, and transport for offshore oil platforms, among others according to the developer.